निर्दोष कर्मचारीले यसरी नै आत्महत्या कहिलेसम्म गर्ने ? – Makalukhabar.com
१ हजार घुसको आरोपपछि आत्महत्या गरेका खरिदार निर्दोष ठहर, दोष कसको ?
मकालु खबर	 Sep 12, 2020 मा प्रकाशित 210
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाहीमाथि प्रश्न खडा भएको छ । अख्तियारको छवि हो अथवा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी तथा अनुसन्धानका लागि खटिएका अख्तियारका अधिकारीहरूको छविनै त्यस्तै हो । साँच्चिकै भन्नु पर्दा केही समययता अख्तियारको गतिविधि शङ्कास्पद देखिन थालेको छ ।
राष्ट्रको एक मात्र अख्तियारी गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वच्छ र निष्पक्ष काम गर्छ भन्ने सोच्नु व्यर्थ हो जस्तै लाग्न थालिसकेको छ । वास्तवमा भ्रष्टाचार गर्ने, लाखौँ, करोडौँ, अर्वौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने घुसखोरीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा लिन नसक्नु, चलखेल हुनुले अख्तियारभित्रको स्वच्छता कता कता डगमगाएजस्तो देखिएको छ ।
ठुलालाई ऐन सानालाई चयन भनेजस्तै अख्तियारले पनि ठुलालाई अनुसन्धान गर्न नसक्नु सानालाई कारबाहीको दायरामा शङ्काकै भरमा हिरासतसम्ममा लिएर मानसिक तनाव दिनु कतिसम्मको निष्पक्ष र स्वच्छ काम कारबाही हो भन्न सकिन्छ र ? कसलाई भन्ने दोषी ? जो मानसिक यातनापछि आत्महत्या गरेको एक वर्षपछि निर्दोष ठहरिन्छन् ।
एक हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कलङ्की मालपोत कार्यालयका खरिदार रामहरि सुवेदीलाई विशेष अदालतले आरोपबाट सफाइ दिएको छ । अभियोग प्रमाणित हुन नसकेर सफाइ पाएको फैसला सुन्न नपाउँदै मुद्दा चलेर धरौटीमा छुटेको एक सातापछि उनले आफ्नै घरमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका थिए ।
गत साउन २२ गते १ हजार घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय कलङ्कीका खरिदार सुवेदीलाई पक्राउ गरेको थियो । सुवेदीलाई आयोगले कार्यालयमै बोलाएर ४२ दिन थुनेर अनुसन्धान गरेको थियो । कलङ्की मालपोतबाट ल्याइएको सिसिटिभी फुटेजको रेकर्डका क्रममा सुवेदीले सेवाग्राही कृष्णप्रसाद घिमिरेसँग १ हजार रुपैयाँ लिएको दृश्य देखिएको भन्दै अख्तियारले खरिदार सुवेदीलाई आयोगको कार्यालयमै हाजिर हुन बोलाएको थियो।
सुवेदीलाई बयानकै क्रममा साउन २२ गते हिरासतमा लिएको अख्तियारले ४२ दिन थुनेर मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा दायर भएको रातसमेत अख्तियारमै बिताएर उनी भदौ ३१ गते धरौटीमा रिहा भएका थिए । रिहा भएको एक सातापछि सुवेदीले २०७६ असोज ६ गते भक्तपुरस्थित आफ्नै घरमा आत्महत्या गरे । पुस र फागुनमा दुई पटक सुनुवाइ गरेपछि विशेष अदालतले गत असार ३० गते घिमिरेलाई सफाइ दियो । फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । विशेष अदालतका सदस्यहरू चन्द्रबहादुर सारू र रवि शर्मा अर्यालको इजलासले आरोप पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै सफाइ दिएको हो ।
सुवेदीले घुस लिएको भनिएको रकम बरामद नभएको तथा घुस दिने भनिएका व्यक्ति उक्त कार्यालयका सेवाग्राही भए/नभएकोबारे अख्तियारले अभियोगमा केही उल्लेख गर्न नसकेको फैसलामा उल्लेख छ।
पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूलाई केलाउँदा अख्तियारका अपरेसन र कामकारबाहीमाथि जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ । स–साना रकमका तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई थुन्ने तथा कारबाही चलाउने र ठुला भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु तामेली राख्दै चोख्याउने गरेको आरोप अख्तियारमाथि छ । विगत केही वर्षयताका घटनाक्रमहरूले पनि यही देखाउँछ । त्यसो त निरोधात्मकतर्फ के गर्‍यो त भन्ने प्रश्न अर्को जवर्जस्तरुपमा खडा भएको छ ।
आयोगले काम नै गरेको छैन भन्न खोजिएको होइन । अख्तियारले ठुला ठुला अपरेसनहरू पनि चलाएकै छ । देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभियानमा लागिरहेको सबैलाई विदितै छ । तर साना पदका कर्मचारीहरू जो निर्दोष छन् उनीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मानसिक यातना दिइनु कतै आयोगको छविमा प्रश्न चिन्ह खडा हुनु हो । राजनैतिक पहुँच भएका माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ जोसुकै उनीहरू जस्तोसुकै घुषकाण्डमा पनि निर्दोष साबित हुन्छन् । अब यस्ता घटनाक्रमहरूबाट अख्तियार सजग र सचेत हुनु जरुरी छ नि अख्तियार हुनु र नहुनुको कुनै तुक छैन । हुनु भन्दा त नहुनु नै ठिक भन्ने आम नागरिकको धारणा बन्न जान्छ ।